TÜVASAŞ waxay ku sugan tahay meel ay ku soo saarto baabuurta tareenka laga keeno | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaTÜVASAŞ waxay soo saari kartaa gawaarida tareenka laga keeno
11 / 02 / 2020 54 Sakarya, tareenka, GUUD, HAY'ADAHA, Headline, Gobolka Marmara, Tüvasas, TURKEY
tuvasas waxay soo saari kartaa gawaarida tareenka laga keeno
Madaxweynaha Turkiga Kamu-Sen Önder Kahveci, ayuu yiri TÜVASAŞ mar dambe awood u soo saara baabuurta rail in ay yihiin laga keeno dibadda iyo in madfac ku soo jabay.
Madaxweynaha Turkiga Kamu-Sen Önder Kahveci, calanka Turkish Gaadiidka-Sen Guddoomiyaha Nurullah of Turkey baabuur Industry A.Ş. (TÜVASAŞ) soo booqday. Gudoomiyayaashii la kulmay shaqaalaha halkan waxay aadeen xarumaha bulshada ee TÜVASAŞ. Madaxweynayaasha laanta Sakarya ee ururrada midowga ayaa iyaguna goobjoog ahaa intii booqashada lagu jiray. Madaxweynaha Turkiga Kamu-Sen Önder Kahveci helay qiimaynta xubnaha saxaafadda halkan.
Bayaanka Kahveci waa sida soo socota: Waxaan aragnay horumar aad u muhiim ah intii lagu gudajiray booqashadeena TÜVASAŞ maanta. Waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan shaqaalaha TÜVASAŞ horumarkan guuleysta.
TÜVASAŞ waxaa loo xilsaaray inuu soosaaro Tareenka Qaranka ee Korantada iyadoo go'aan uu gobolkeennu qaatay sanadkii 2013.
INFRASTRUCTURE ayaa ku dhacay T BEENVASAŞ
Intii aannu booqashada ku joognay; Magaalada TÜVASAŞ, mahadsanid mashruucan, dhismaha xarunta ay ku sameysaneyso aluminiumka dhismayaasha tareenka ayaa la dhammeystirey, dhammaan jumladihii robotic-ga ee loo adeegsan lahaa xarunta ayaa laga soo saaray gudaha iyo qaran ahaan, iyo in wax soo saarka uu u baahan yahay gawaarida jirka Aluminium ee aan waligeed loo adeegsan waddankeenna iyo kaabayaasha uu u baahan yahay mashruucan in laga helo TÜVASA. Waxaan ogaanay in dhirta meesha ay ku yaalliin kuna rinjiyeeyaan sidoo kale la dhameystirayo. Waxaan sidoo kale baranay in 240 gawaari oo aluminium ah lagu soo saari karo sanad walba xarumahaas la aasaasay. Waxaan goob joog ka nahay soo saarista maydadka Tareenkayaga Qaranka ayaa sidoo kale ka bilaabay xarunta.
Guushaan, TÜVASAŞ waxay gaartay suurtagalnimada in ay noqoto tan keliya ee waddankeenna iyo juqraafi ahaan u dhow.
Mashruucan, kaas oo loo xilsaaray TÜVASAŞ, waxaan aragnay inuu bilaabay inuu soo saaro Tareenka Korantada ee Aluminium xawaare dhan 160 km / saac isla markaana ay sii waddo wax-soo-saarkiisa si deg deg ah.
LACAG LA'AAN IYO FURSADAHA DALKA
Intaa waxaa sii dheer, waxaan ogaanay in TÜVASAŞ ay u noqotay mabda 'in la keeno agabyada loo adeegsado baabuurkan iyo dhammaan baabuurta ay soo saari doonto laga bilaabo hadda, iyo sidoo kale iskaashi ay la yeelato ASELSAN, ardayga dalkeenna, arrimahaas.
Khibrada uu ka helay TÜVASAŞ arintan, waxaan ka marag kacnay in Tareenka Korantada Korantada ee lagu shaqeynayo xawaare dhan 225 km / saac la bilaabay lana soo gabagabeynayo.
FADLAN FARSAMADA CARRUURTA DHAMMAAN EE DHAMMAAN
Sidoo kale waa wax lagu farxo in TÜVASAŞ ay taageero weyn ka heshay Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha si kor loogu qaado suurtagalnimada si ay ugu fuliso dhammaan hawlaheeda si guul leh laga bilaabo qaabeynta ilaa soo saarista dhammaan noocyada gawaarida rakaabka casriga ah.
Isbadalkan, TÜVASAŞ wuxuu kasbaday karti uu ku soo saaro Tareenada Xawaaraha Sare, Gawaarida metro, Gawaarida Nidaamka Tareenka.
Waxaan aragnaa in TÜVASAŞ ay qabatey qaybteeda sidii hay'ad dowladeed oo caan ah, oo ay u soo saartay waddankeena iyo qarankeena oo leh aqoonteeda iyo kartideeda oo dhan.
Iyada oo ku saleysan hadalada Madaxweynahayaga, oo ay wehelinayaan taageerada Wasiirkayaga, shaqada hay'addan kaladuwan, ee iskudayaya in ay ahaato maxalli iyo mid qaran, waa in la qabtay 30 sano ka hor. Waxaan jeclaan lahayn inaan uga mahadcelinno Madaxweynahayaga, Wasiirka iyo TCDD taageerada ay u hayaan TÜVASA we waxaanna codsaneynaa in taageeradani sii socoto.
HALKAN HOOS KA DHAGEYSO
Waxaan si gaar ah u dooneynaa taageeradan sababtoo ah waxaan aragnay in TÜVASAŞ ay hadda jabisay qolofteeda ayna ka dhigi karto dhammaan baabuurta sidda rakaabka oo laga keeno dibadda, gaar ahaan gawaarida Degdega ah ee Xawaaraha Sare iyo Sare. Waan la soconaa sida ay xaaladdan u dhibayso shirkadaha shisheeye iyo wakiilkooda. Natiijo ahaan, waxaan ka warqabnaa xaqiiqada ah inay beddeli doonaan dhammaan noocyada xunxun iyo damacii sidii ay hore u sameeyeen si looga hor tago waxyaabahaas oo dhan.Iyadoo taasi keentay, waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shaqaalaha TÜVASAŞ, oo ah naqshadeeyeyaasha sheekadan guusha, waxaanan rajeynayaa sii wadida guusha. (The Sakaryayenihab)
3 ayaa soo jiidatay jidka tareenka Erzincan-Trabzon
Waa maxay network tareenka ee Turkiga
Uludag baraf ma jirto, ganacsatadu waxay ku jiraan xaalad adag
Dukaamada Tareenka Zonguldak ee xaaladaha adag
Mashruuca Heerka Sare ee Kayseri Yerköy